October 25, 2020 - Padaethar
October 25, 2020 by Padaethar
အချစ်စစ် နှင့်တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေပြသတဲ့ အမူအရာ (၈) မျိုး ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသတဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ မတူပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးခေါ်ပုံချင်းကွာလို့ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြောင်းပြသတဲ့ အမူအရာတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်..။ ၁။ သင်ပြောတာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတယ် များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် နားထောင်စွမ်းရည်ပိုသာပါတယ်။ အရိုးသားဆုံးပြောရရင် တချို့အမျိုးသားတွေက နားထောင်စွမ်းရည်တော်တော်ညံ့တယ်ဗျ။ အမျိုးသားတွေကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုသာဂရုတစိုက်နားထောင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က သင်ပြောတာကိုနားထောင်ပေးပြီး စိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့အပြင် လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြောတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သူချစ်ရတဲ့သူလို့သာ သဘောပေါက်လိုက်ပါ။ ၂။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့ဝန်မလေးဘူး ချစ်ရသူတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရမယ်ဆိုတာခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရင် နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတာက အမျိုးသားတွေပါ။ မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပေးခဲ့တယ် ဆိုတာက မင်းအတွက် သူ့ရဲ့အချစ်ကိုပြသတာပါ။ ၃။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြသတယ် အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကို … Read more
ကောင်မလေး လည်ပင်းက အညိုကွက်က ဘာဖြစ်တာလဲ ” စုန်းစုပ်တာနေမှာပေါ့ “
တဏှာ ပေါ်စွဲလမ်း တပ်မက်ပြီး အရွယ်နုနယ်မှုကို လိုလားတပ်မက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
တဏှာ ဆိုတဲ့ တပ်မက်ခြင်း မှာ အကြောင်းအရာ တွေများပြား လှပါတယ်။ စားချင်၊ ဝတ်ချင်၊ လှပချင်၊ လိုချင်၊ ပိုင်ဆိုင်ချင်၊ ချမ်းသာချင်စသည့် တပ်မက်မှု တဏှာ များစွာ တွေထဲက ကာမ တဏှာ က လည်းအပါ အဝင်ဖြစ် ပါတယ်။ လူ့လောကမှာ အဖို နဲ့ အမ နှစ်မျိုးရှိကြသလို တိရိစ္ဆာန် သတ္တဝါ တွေ ထဲမှာ အဖိုနဲ့အမ သာ ရှိကြတာ သိကြပြီးသားပါ။ အဖို အမ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်သာ မွေးဖွား ပေါက်ဖွား လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ် ပါတယ်။ အသိဉာဏ် ရှိသောလူသား တွေ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေစား သောက်ကြရာမှာ လုပ်ငန်းမျိုးစုံရှိ တဲ့အထဲက ကိုယ်ခန္ဓာကို ရင်းနှီး ရှာဖွေစားသောက် ကြရတဲ့ … Read more
လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ…ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး… ထူးဆန်းတာတာကတော့…အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား…ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ… ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ…တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို..ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ်… တတိယ…သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ်အခုတော့…အဲလို (၃) မျိူးသော ဒေါသတွေ မရှိတော့ဘူး..ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းဟာ…ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးမှ ဖောက်ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး…သူ့ရဲ့ မွေးရာပါ အငုံ့စိတ်ကိုက သူ့အသွေးအသား အတွေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပြီးသားပါ… အခွင့်အရေး မကြုံလို့သာ…သူလုပ်ခွင့်မရခဲ့တာပါ…ဒါကြောင့်…ကိုယ်နဲ့မယူခင် Single ဘဝမှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ကိုယ်နဲ့ယူပြီးမှ ငြိမ်မယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှ … Read more
သင့်ကို သူချစ်နေပြီဆိုတာ ပြောနေတဲ့အမူအရာ (၆)ခု
ယောင်္ကျားလေး အများစုက ချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ အလွယ်တကူ ထုတ်မပြောကြပါဘူး။ ချစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီးမှငြင်းပယ်ခံရမှာကို သူတို့ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင် ကြားချင်တဲ့ စကားသုံးခွန်းကို သူ မပြောလို့ စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ သင့်ကို သူချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မပြောရဲသေးတဲ့ အချိန်တွေမှာဆို သူ ချစ်နေကြောင်းကို အမူအရာတွေနှင့်သာပြသနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအမူအရာတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ (၁) သင့်အနားမှာ ရှိနေရတာကို သဘောကျတယ် ယောင်္ကျားလေးတွေက သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အချိန်ဖြုန်းရတာကို ပိုသဘောကျတတ်သူတွေပါ။ အကယ်၍ သူဟာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အချိန်မဖြန်းတော့ဘဲ သင့်နှင့်ဘဲ အတူတူ အချိန်တွေ အကုန်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို ချစ်နေပါပြီ။ ပြီးတော့ အရင်က သူသဘောမကျတဲ့ အရာတွေကို သင့်ကြောင့် လုပ်လာတယ်ဆိုရင် သင့်ကို ချစ်ကြောင်း … Read more
“မိန်းခလေးတစ်ယောက်က” ကိုယ့်ဘဝကိုယ် လေးစားရကောင်းမှန်းမသိရင်…. ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ လက်ထဲက ကစားစရာ အရုပ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်…. မာနတရားကို လက်ကိုင်မထားပဲနေရင် …. ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် သဘောထားတာ ကြုံရတတ်တယ်…. အဖြေလွယ်လွယ်ပေး သဲသဲလှုပ်ချစ်ပြရင် … ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အထင်သေးတာ တန်ဘိုး မထားတာခံရမယ်…. ခပ်ပျော့ပျော့ ခပ်တုံးတုံးအထာ ဖြစ်ပြရင်…. ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကွက်ရွှေ့တာတွေ လှည့်စားတာတွေ ခံရမယ်…. မိန်းခလေးဖြစ်ရတာ …ဘယ်နေရာမှ မနိမ့်ကျပါဘူး… ဘုရားကပေးတဲ့ …အလှအပတရားတွေအကုန်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်…. နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံရှိထားတယ်… ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရထားတယ်… မချစ်ရင် ငြင်းခွင့်ရှိတယ်… မုန်းရင် လှည့်မကြည့်ခွင့်ရှိတယ်…. ဖြစ်ချင်တာတော့ ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး… ဖြစ်သင့်တာတော့ ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်…. ရွေးချယ်မှု မမှားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်…. လောကမှာရှင်သန်ဖို့ဆိုရင် … ခြင်္သေ့လို ရဲရင့်ပြဖို့လည်းလိုတယ်လေ… အမှားရှိခဲ့တိုင်းလည်း အပြစ်မဟုတ်ဘူး… … Read more
အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ…
အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တပါးနန်းတက်ခဲ့တယ်… ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန်းအင်အားကြီးပြီး စစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်… ထိုဘုရင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့… အတွေးအ ခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်… အဲ့ဒီအခွင့် အရေးကတော့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ… ဘုရင်ငယ်လေးအတွက် အချိန်တစ်နှစ်ပေးထားပြီး မဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်… “လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ “ အဲဒီမေးခွန်းကတော့…ဘုရင်းလေးနဲ့ ပညာရှိအမတ်တွေကို ခက်ခဲရှုတ်ထွေးစေ တော့တာပါဘဲ… တချိုက မဖြစ်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းလို့ထင်ကြတယ်…… ဒါပေမယ့် အချိန်းတစ်နှစ်ရဖို့အတွက် အဖြေရှာဖို့ လက်ခံလိုက်ရတာပေါ့….. ဒါနဲ့ သူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေ၊ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ပညာရှိတွေ၊ တရားသူကြီးတွေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ ပြည့်တန်ဆ … Read more
မိန်းကလေး ၁ ယောတ် LIVING TOGETHER နေခဲ့ မိလို့ဒီလိုအဖြစ်ကြုံခဲ.ရပါတယ် ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
အစ်ကိုအောင်အောင်ရေ အစ်မ မော်မော် ကတွေ့ ချင်လို့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါ တဲ့မော်မော်ရဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်တေဇာမကောင်းဖြစ်နေတာ ကဖုန်းဆတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြောပါသည်။ တနယ်ထဲသား ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ….. မော်မော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လာလုပ်တာ ၁ နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက် နေ ကိုတော့ကြားသည်။ တခေါက်မှမရောက်ဖြစ်သေး ။ ခုတော့သူ ကိုယ် တိုင်ခေါ်ခိုင်းနေပြီမို့ညနေဖက်အိမ်မှထွက်ခဲ့သည်။ သူအိမ်ရောတ်တော့ သူလုပ်ဖေါ်ကိုင်တ်ေတွေက သူအပေါ် ထပ်မှာရှိတယ်ပြောလို့ကျွန်တော် အိမ်အပေါ်ထပ်သို့တန်း တက်ခဲ့သည်။ မော်မော်က ကခြေသံကြားသဖြင့်ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်အနားရောက်သွားသည်နှင့် ။ အကိုအောင်အောင် ကတော့ငါ့ညီမလေး ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲလိုသတင်းတောင်လာမေးဖေါ်မရဘူး။ ခေါ်ခိုင်းမှပဲပေါ်လာတော့တယ်နော်။မဟုတ်ပါဘူးမော်မော်ရာ အကိုလည်း ဒီရက်မှာအလုပ်နဲနဲ များနေ လို့ မလာဖြစ်သေးတာပါ။ မော်မော်ကိုကြည့်ရတာ အသားအရေ ဖြုဖတ်ဖြုရော်နှင့်တော်တော်လဲ ပိန်သွားသည်။ ဟိုတုံးကမော်မော် နှင့်လုံးဝမတူတော့။မော်မော် နှင့်ကျွန်တော်က ၄ နှစ်ကွာသည် … Read more
တင်ပါးယား၍ ကုတ်မိရာမှ နေ့ချင်းညချင်း ဘဝပြောင်းသွားရသည့် မိန်းကလေး
တင်ပါးယား၍ ကုတ်မိရာမှ နေ့ချင်းညချင်း ဘဝပြောင်းသွားရသည့် မိန်းကလေး ကျွန်​မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည်။သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည် ။ တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက်က ခင်မြရည် ဖြစ်သည် ။ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်း မော်လီက ဓာတ်ပုံ ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့…၊ ပလွတ် ဆိုပြီး အင်တာနက် ချိတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ချလိုက်သည် ။ ကျမ တို့ သုံးယောက် အတူရှိသည် ဆိုတော့ tag တွဲတင်လိုက်သည် ။ ဆေးထိုးလိုက်ပီ ဟု မော်လီ က ရေးတင်လိုက်သည် ။ ခင်မြရည်က အရင် like ၀င်လုပ်သည် ။ ကျမ … Read more